American Golden Retriever: Iyi ndiyo yakanakisa Goldie kwauri here? - Inobereka
American Golden Retriever: Iyi ndiyo yakanakisa Goldie kwauri here?
Golden Retrievers kazhinji haidi nhanganyaya dzakakosha. Ivo ndeimwe yemhando dzinozivikanwa kwazvo dzembwa - kwete muUS chete, asi munyika!
Idzo dzinoyevedza mhuka dzinovaraidza dzemhuri dzinosiya nzira dzesimba rakanaka chero kwavanoenda.
Sangana neAmerican Golden Retriever
Asi waiziva here kuti kune matatu marudzi eGoldies? Isu ’’ taura zvese, asi ngatitarisei pane izvo zvinoita kuti American Golden Retriever ibude.
Chii chinonzi American Golden Retriever?
Chii chinonzi American Golden Retriever chinotaridzika?
Temperament: Iyo American Goridhe Retriever sechipfuwo
Kuchengeta yeAmerican Goridhe Retriever
Kutsvaga eAmerican Goridhe Retriever imbwa dziri kutengeswa
Mhando Dzakafanana neAmerican uye Chirungu Goridhe Retriever
Unofanirwa here kuwana American Golden Retriever?
IAmerican Golden Retriever ndeimwe yemisiyano yerudzi urwu, asi ivo vakafanana nechero goridhe rakachena .
Ngatikurukurei zvishoma nezve iyo imbwa mavambo. Unogona kutsvaga nhoroondo ye Goridhe Kudzosera kumashure kusvika pakati pezana ramakore rechi19 Scotland uko kwavakashandiswa mukuvhima nekutora shiri dzemvura.
Urwu ruzivo rwekuvhima rwakazopedzisira rwaenda kuNorth America nemamwe makondinendi, ichienderera mberi nekukwira kwayo kusvika mukurumbira. Nhasi, ivo rudzi rwechitatu rwakakurumbira muUS uye vari pachinhanho che8 muUK.
Vanhu vakanamata Goldens nekuda kwehungwaru hwavo uye nechitapira maitiro , izvo zvakaita kuti vakwanise mune kumwe kushanda kwebasa sekuona, kutsvaga & kununura, uye imbwa dzekubatsira vakaremara.
Mhando: Chirungu Goridhe Retriever VS. American Goridhe Retriever
Sangana neiyo White Goridhe Retriever
Goldens akatanga kuzivikanwa ne YeBritish Kennel Kirabhu (KC) muna 1913 uye ne American kirabhu kirabhu (AKC) muna 1932. Mazinga emhando dzekirabhu akachinja kuti aenderane nezvinodiwa nevaridzi vembwa mumatunhu avo kana nyika.
Musiyano wakajairika weGolden Retriever uchienzaniswa neAmerican Goldens ndiwo maGoldies muEurope, anonziwo Chirungu Cream Goridhe Retrievers .
Sezvo pane iyo United Kennel Club (UKC) inobereka yakajairwa yeChirungu Goldens, vane bvudzi rakapfupika uye rinorema iro uya mumumvuri wekirimu , uko vamwe vanoita kunge vane jasi jena rine mitsara yegoridhe.
Ivo vane rakakura uye rakakura bhokisi-kunge musoro uye nzeve dzakadzikama-saizi.
Kana zvasvika pakuzvibata, echirungu akasiyana anozivikanwa kuve kudzikama uye nzira iri nyore kudzidzisa .
Kune hutano, kunyangwe mhando mbiri dzeGolden Retrievers dzichirwara nezvirwere zvakafanana, Chirungu Goldens anogona kunakidzwa neakawanda ehupenyu hwavo, inova makore gumi nemaviri.
Tinoda kujekesa kuti zvisinei nekwavanoberekerwa, makirabhu ekennel anoreva ese se 'Golden Retrievers.'
American Goldens zvakare ane yakafara uye arched dehenya ine yakati rebei uye yakadzika kumeso. Ivo vane nzeve ipfupi uye akakomberedzwa akakomberedzwa marimu, ane mweya une mweya ari pakati nepakati kukura. Kune rimwe divi remuviri wavo muswe wakakombama.
Iyo AKC inobereka yakajairwa rinotsanangura ruvara rwejasi ravo se 'goridhe rakapfuma, rinoyevedza remhando dzakasiyana-siyana.' Chero Goldie ane furhu iro rakareruka kana rakasviba zvinofungidzirwa kuti kukanganisa kana kusazivikanwa .
Mhando dzese dzine jasi rakapfava uye topcoat isina mvura . Zvichienzaniswa nemamwe marudzi, ivo vane yakatwasuka feathering uye mukobvu jasi.
Dzimwe nzvimbo dzemiviri yavo, senge mutsipa, zvidya, uye miswe, vane mapfumo anorema asi asiri akareba zvakanyanya . Kana iwe uri kuronga kujoina imbwa dzinoratidza, iyo yakasarudzika kutaridzika nguva dzose ndiyo yakanyanya kunaka nzira yekuenda.
Yakakura sei iyo American Goridhe Retrievers inowana?
IAmerican Golden Retriever inomira chero kupi kubva 21.5 kusvika 24 inches (55 kusvika 61 cm) pakureba uye inorema pakati 55 uye 75 mapaundi (25 kusvika 34 kg). Vakadzi vanogara vari vashoma pane varume.
Kunyangwe ivo vakangwara uye vachinyatsodzidziswa, Goridhe Retrievers dzinozvarwa kuti dzive mukufamba.
Kunyangwe kana vachigona kugara mumafurati zvakanaka chete, tinovakurudzira kuimba ine chivanze chakachengetedzeka, chakasununguka kwavanogona kumhanya nekutamba chero nguva yavanoda.
Zvese zveGold Retrievers zviri ane hushamwari, akavimbika, akangwara, uye anowirirana zvakanaka nevana . Humwe hunhu hunozoita kuti musiyano weAmerica ubude pachena izita ravo resimba. Ivo ingori bhora hombe rekunakidzwa avo vanonyanya kushingaira uye vanomhanya.
Sanganisa zvese izvo nevakasimba simba ravo rekuvhima, uye iwe unowana imbwa isinganeti .
Sezvo ivo vachida kuve chikamu chemabasa ezuva nezuva emhuri, hazvina kunaka kusiya iyi pooch yeushamwari kwenguva yakareba nekuti ivo inowanzo kuve nekuparadzanisa kunetseka .
Kana vakagumbuka uye vanofinhwa, tarisira chipfuwo chinopfuura nepfungwa dzekushushikana, uye chobva chaparadza.
Unoda kuona kuti zvakaita sei kuva neAmerican Goldie? Tarisa uone ino inosetsa vhidhiyo:
Ko American Golden Retrievers vanohukura zvakawanda here?
Rudzi urwu ndirwo kazhinji yakanyarara uye inohukura pano neapo . Asi kana iwe ukaona yako yeGolden Retriever yakanyanyisa kuhukura, kurira, kana fenicha kutsenga, izvi zvinogona kuve zviratidzo zvekuparadzanisa kunetseka.
Zvichida zvakanakisa kuti uyu fido anogara mumusha mavanenge vane wavanobata naye canine, kana zvimwe zvipfuyo zvekuzvichengeta. Kuva nefenzi pal yekutamba nayo kunogona zvakare kubatsira kubata neyako Goldie's pent up simba.
Tinogona kufunga nezveGolden Retrievers kuve yakaderera yekuchengetedza nekuti ivo vanongoda nguva nenguva kukwesha.
Vamwe vanoti imhando yepamusoro yekuchengetedza nekuda kwehukuru hwavo uye huwandu hwebvudzi ravanaro, uye vanodurura zvakanyanya. Asi ndezvipi zvinodiwa zvekutarisira?
Kuveura ndebvu kweAmerican Golden Retriever kunobatsira nekuteura here?
Kwete, hazviite, saka USASHURE yako Goridhe Retriever. Chero rudzi rwakapetwa zvakapetwa ruviri harufanirwe kuveurwa kunze kwekunge iri yekupedzisira sarudzo nekuda kwehutano hwavo kana mamiriro akashata bvudzi.
Izvo jasi gobvu rinovabatsira kudzora tembiricha yemuviri wavo uye inodzivirira ganda ravo kubva kumamiriro ekunze akasiyana .
Nekuveura bvudzi ravo rakanaka, urikukuvadza kwavo kwekuzvidzivirira uye zvinokonzeresa, kwete chete pahuswa hwavo asiwo ganda ravo uye hutano.
Kukuvadza bvudzi rebvudzi kunogona zvakare kureva kuti bhachi ravo rinogona kusazombomira zvakanaka zvakare.
Kuva neGolden Retriever zvinoreva kuti unoziva nezvenguva uye kutarisirwa kwavanoda . Chengetedza jasi rembwa yako ne kuikwesha zuva nezuva , uye nekushambidzika kwehunyanzvi, muuye naye kugarenda mwedzi miviri yega yega.
Zvishongedze nemabhurashi akanakisa eGolden Retrievers, senge yakasimba bristle bhurasho , ku Muzinga Greyhound , uye a de-kudurura rake .
Yakawanda sei kurovedza muviri iyo American Goridhe Retrievers inoda?
American Goridhe Retrievers chero chinhu asi husimbe, saka awa kana maviri ekurovedza muviri zuva nezuva anokwana .
Kune chirevo chinoti 'imbwa yakaneta imbwa inofara,' asi haufanire kuwedzeredza mbwanana yako kudzivirira kuisa kumanikidza pamapfupa avo uye majoini izvo zvisati zvanyatsogadziriswa zvakadaro.
Kuita izvi kunogona kutungamira kumatambudziko ekufamba, uye gare gare, hudyu dysplasia.
Kunze kwekurovedza muviri, nguva yekutamba, uye kurovedzwa, ipa zviitiko zvinomutsa imbwa yako mupfungwa. Inogona kuve yakapusa seye dambanemazwi kana a chitoyi - chero chinhu chichaita kuti afunge.
Kudya kunokurudzirwa kuAmerican Goldie
American Goridhe Retrievers ari zvinoshamisa kusimba-kurerekera , saka parutivi pekunamatira kune yekudya nzira, ita shuwa kuti mhando yekudya uye huwandu hwembwa chikafu iwe chaunopa chipfuwo chako zvinoenderana nebasa rake danho, zera, uye saizi.
Yakazara-yakakura maGoldies anoda kudya inenge 2 kusvika ku3,5 makapu echikafu pazuva . Dzivisa mapikicha ane ma-high-calorie nekuti anogona kuita kuti Goldens ikure nekukurumidza, izvo zvisina kunaka kukudziridzwa kwemapfupa avo.
Kuti ikubatsire iwe kusarudza yakanakisa imbwa chikafu chiratidzo cheako Goridhe Retriever, isu tine chinyorwa izvo zvinogona kukubatsira.
Inguva yakareba sei iyo American Goridhe Retrievers inorarama?
American Goldies ane hupenyu hupfupi kupfuura Chirungu Cream Goridhe Retrievers. Wepakati pekutarisirwa kwehupenyu hweAmerican Goridhe makore gumi nemwedzi misere, nepo shamwari yake yeBritish inowanzo rarama kusvika pamakore gumi nemaviri nemwedzi mitatu.
Pane ongororo yakaitwa neGolden Retriever Club yeAmerica muna 1998. Vakaona kuti dzinosvika makumi matanhatu muzana muzana yeAmerican Golden Retrievers vanofa nechirwere chegomarara kana zvichienzaniswa ne39% chete yeChirungu Golden Retrievers.
Kunze kwekenza uye zvisinei nerudzi, maAmerican Goldens anogovera matambudziko ehutano, senge chiuno negokora dysplasia, Gastric Dilation-Volvulus, pamwe nematambudziko eziso uye ehutachiona.
YeAmerican Goridhe Retriever puppy inogona kutenga chero kupi kubva pa $ 500 kusvika pa $ 2500 , zvinoenderana nenzvimbo yemuberekesi, kufarirwa kwekennel, uye neropa remubereki.
Mufudzi akanaka haazeze kukuratidza zvitupa zvehutano uye chero magwaro anobatsira iwe kuti uzive mwana wako waunogona.
Ivo zvakare vaisazongotengesa kune chero munhu. Vafudzi vane mutoro vanochengeta imbwa dzavo vanozoona kuti mutengi akafananidzwa nemwana wavo.
Vagadziri veAmerican Golden Retriever
Zviri nyore kuwana purebreds pamhepo kupfuura imbwa dzekugadzira, chinova chinhu chakanaka, kunyanya sezvo iyo Golden Retriever yakanyoreswa kumasangano ari pamutemo.
Heano mamwe mawebhusaiti kana iwe uchinzwa kuti wagadzirira iyo American Goridhe Retriever yako wega:
Goridhe Meadows Vanotora (Moorpark, CA)
Tsillan Goldens (Lake Chelan, WA)
North Nyeredzi Goridhe Kudzosera (Logan, UT)
SunGolden Kennels (Longview, CT)
American Golden Retriever anonunura
Kugamuchirwa kwete chete nzira isingadhuri yekutora chero imbwa dzinza kana chipfuwo chaunoda, asi zvakare ndiyo nzira yakanakisa yekupa pooch mumwe mukana murudo uye imba.
Kana iwe wakagadzirira kuvhura moyo wako kune yekare yeGolden Retriever kana kunyange mimwe yemisanganiswa yayo, tarisa nzvimbo idzi dzekununura:
Vanodzosera Goridhe Vanoda Kununurwa (Cleveland, OH)
Goridhe Retriever Kununura kweMid-Florida (Goridhe, FL)
Goldens Pasina Border (Las Vegas, NV)
Yankee Goridhe Retriever Kununura, Inc. (Hudson, MA)
Goridhe Retriever Kununura kweWisconsin (West Allis, WI)
Ndiri kufunga kuti ndeapi mamwe emhando dzeRetriever ari kunze uko? Pamwe imbwa inoita kunge maGoldies?
Aya ma canine ane zvakafanana neAmerican Golden Retrievers uye nemamwe marudzi eGoldens, asi vane chimwe chinhu chakasarudzika nezvavo, futi.
Nova Scotia Duck Kubhadhara Kudzosa
Anotamba weAmerica Goridhe Retriever
American Goldens inogadzirira mhuka dzakanaka kwazvo kana yakagadzirirwa mhuri chaiyo.
Vanoda muridzi anokwanisa kuenderera navo ane simba uye anotamba zvisikwa , uye mumwe munhu asingazovasiye kwenguva yakareba vari voga.
Kana uine vana vadiki, Goridhe Retrievers ichaita sevanotarisa vakoma vakuru , saka izvo zvinofanirwa kukuudza chimwe chinhu.
Iwe unofanirwa zvakare kuve wakagadzirira kubata neizvi vane mukurumbira vadururi . Kuva neyako pooch kunogona kusanyanya kuoma, asi chero pooch ine saizi iyi haigone kuve nyore kutarisira.
Iwe unogona kuzvifungidzira iwe pachako uchiwana American Golden Retriever? Goverana pfungwa dzako muchikamu chekutaura pazasi.
Yako Yakazara Nongedzo pane Inonakidza Corgi ChiGerman Mufudzi Musanganiswa
Nhungamiro Yakazara Kune Iyo Bhuruu Tick Beagle Imbwa
Boxer Lab Sanganisa: Kutarisa Kune Izvo maBoxadors Ari
Yorkipoo Zvese Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Iyo Yorkie-Poo Imbwa
Weimaraner Imbwa Inobereka: 12 Chokwadi Kuti Uzive Usati Watenga
Chii chinonzi Malshi uye chii chakanaka pamusoro pavo?
Gomo reBernese (Imbwa Inobereka Ruzivo & Nongedzo Yemuridzi)
Zvinomwe zveZvakanakisa & Rarest White Fluffy Imbwa
Pomeranian Husky: Iyo Yakazara Imbwa Inobereka Kuongorora uye Gwara
5 Zvikonzero Zvekuti Nei Imbwa Dzinodya Poop & Kuimisa
Imbwa Inobereka Info: Ndiyo Mini Aussiedoodle yakangwara kupfuura iwe?
kukura kunoita matoyi poodles
chii chinonzi puggle chakasanganiswa nacho
imbwa yangu inofanira kuyera sei Calculator
puppy harness sei kupfeka
refu bvudzi german shepherd temperament
Inobereka Imbwa Faqs Imbwa Hutano Zvigadzirwa Zvembwa Imbwa Kudzidziswa Featured Mazita Embwa Hutano Imbwa Kudzidziswa, Inoratidzwa